Uhlelo lukamasingcwabisane (Funeral Aid Scheme) – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Uhlelo lukamasingcwabisane (Funeral Aid Scheme)
Umhlomulo wosizo lomasingcwabisane ukhokha isamba uma kushoniwe ukuze usize ngezindleko zomngcwabo
Umasingcwabisane unikezwa ngaphandle kobufakazi bokuthi umuntu ubenomshwalense. Lo masingcwabisane uqukethe le mihlomulo
Ilungu likamasingcwabisane (Principal Member) R35 000
Umyeni/unkosikazi onelungelo lokuthola umhlomulo R35 000
Ingane enelungelo lokuthola umhlomulo eneminyaka eyi 14 nangaphezulu * R35 000Ingane enelungelo lokuthola umhlomulo ephakathi kuka 6 no 13 * R17 500
Ingane enelungelo lokuthola umhlomulo engaphansi kuka 6 * R 8 750
* Alikho inani lezingane elibekiwe elivimbela ukuthi zithole umhlomulo.
Kudingeka lokhu okulandelayo
Kungedluli eminyakeni elandelayo
Ilungu likamasingcwabisane (Principal Member): iminyaka engama-65 yobudala
Umyeni/Unkosikazi onelungelo lomhlomulo: 75 years
Lo mhlomulo uyaphela uma
Ilungu likamasingcwabisane (principal member) lishona; noma
Ilungu likamasingcwabisane lingasasebenzi; noma
Ilungu likamasingcwabisane lifika eminyakeni engama 65; noma
Imali ekhokhwa njalo ngenyanga ingakhokhiwe kulelo lungu; noma
Uhlelo lukamasingcwabisane luphela
Kungaba yinoma yikuphi okwenzeka kuqala
Kufanele aziswe uSanlam ngesicelo semali somhlomulo zingakapheli izinyanga eziyisithupha (6) emva kokushona kwelunga okuyilona lomshwalense noma ilunga lomndeni.Umhlomulo ukhokhwa engakapheli amahora angama-48 (forty-eight) uma sekuhanjiswe amaphepha awubufakazi.
Isicelo semali Amaphepha Okudingekayo
Amafomu agcwaliswe ngokuphelele asayinwa kanye namaphepha awubufakazi yilawa alandelayo:
Ikhophi yefomu yokufaka “isicelo somhlomulo wokushona”.
Isitifiketi sokushona okuyisonasona noma ikhophi yesitifiketi sokushona esiqinisekisiwe, esiqinisekiswe yi-Commissioner of Oaths okungeyona, i-Commissioner of Oaths yomqashi;
Ikhophi yefomu eqinisekisiwe yoKwazisa/ ukuBhalisa kokushona/ Ukuzalwa kwengane isishonile (83/BI – 1663);
Ikhophi okuyiyonayona eqinisekisiwe yamazisi yabo bobali, umnikazi womshwalense kanye nozohlomula;
Ikhophi yesitatimende sasebhange elisetshenziswa yilowo ozohlomula.
Okunye okudingekayo ngaphezu kwalokhu okungenhla uma kukhona umaqondana okufanele ahlomule:
Ikhophi okuyiyonayona eqinisekiswe yesitifiketi somshado. Esimweni lapho kuwumshado wesintu owaziwayo, isitifiketi sokubhaliswa noma i-affidavit uma kuwumshado wesintu (singase sigcizelele kuma-affidavits azodingeka ebantwini ababili ababekhona emshadweni);
Esimweni lapho kunabantu ababili abahlala ndawonye njengabashadikazi, i-affidavit esho ukuthi kubona bobali akekho oshadile, kanti bebehlala ndawonye njengabashadikazi, benesibophezelo sokushada unomphelo, futhi besho ukuthi sebehlale izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokushona kwelunga,; kanye nekhophi okuyiyonayona eqinisekisiwe yamazisi yalowo oshonile ongunkosikazi/ongumkhwenyana.
Okunye okudingekayo ngaphezu kwalokhu okungenhla enganeni okufanele ihlomule:
Esimweni sengane ezalwe isishonile, kuhlanganisa ikhophi yefomu eqinisekisiwe yoKwazisa/ ukuBhalisa kokushona/ Ukuzalwa kwengane isishonile (83/BI – 1663); siphinde siding incwadi ephuma kudokotela osuke ekhona noma isibhedlela, eqinisekisa isikhathi sokukhulelwa.
Ikhophi okuyiyonayona eqinisekisiwe yamazisi yengane eshonile; uma isibongo salowo onomshwalense kanye nesengane okufanele ihlomule zingefani, i-affidavit efungelwe eshoyo ukuthi ingane eshonile iyona ebifakelwe umshwalense noma ingane kankosikazi/kamkhwenyana;
Uma ingane okufanele ithole umhlomulo ingashadile futhi ingaphezu kweminyaka engama-21 ubudala kodwa ingapahansi kweminyaka engama-26 ubudala, ubufakazi bokuya njalo esikhungweni semfundo ephakeme esigunyaziwe;
Kanye ne-medical certificate enganeni okufanele ithole umhlomulo engaphezu kweminyaka engama-21 engenawo amandla ngenxa yobuthaka bomzimba noma bengqondo ukuze ikwazi ukuzinakekela.
Umhlomulo wokungcwabela kwenye indawo
Siyakwazi ukubaluleka kokusiza amalungu omndeni ngesikhathi sokushonelwa. Umhlomulo wokuhambisa isidumbu kwenye indawo usizo oluvumela ukuthi kuhanjiswe umzimba welunga elishonile uhanjiswe endaweni yabangcwabi abaseduze nendawo yokungcwaba lelo lunga eseNingizimu Afrika, uma ukushona kwenzeke kude nekhaya lakhe.
Lolu usizo lwamahhala uma kushone ilungu
Lukunikani lolu sizo?
Lolu sizo luhlanganisa
Ukuhanjiswa kwesidumbu soshonile
Ngomgwaqo noma ngendiza, endaweni yabangcwabi eseduze nendawo yokungcwaba lelo lunga eseNingizimu Afrika, izinto zokuhamba zitholakala kuyona yonke iNingizimu Afrika, Lesotho, Swaziland,
Zimbabwe, Botswana, Namibia noma iMozambique ( u-22° ngaseNingizimu noma ngaseNyakatho):
Uma umuntu eshone Eningizimu Afrka, usizo luvumela:
Amalungelo okuhanjiswa kwesihlobo esisodwa esizophelezela isidumbu sesiya endaweni yabangcwabi yokugcina
Ukulala ubusuku obubodwa kwesihlobo esisodwa
* Ngaphansi kwesimo esithile
Okukhethekile kwesiko okubhekelelwayo
Siqikelela ukuthi umndeni osele ungadinga okukhethekile okuhambisana nesiko mayelana nokuhanjiswa kwesidumbu kanti siyoqinisekisa ukuthi lokhu kuyafezekiswa.
Olunye usizo olwenza kubelula ukungcwaba emndenini oshonelwe, kuhlanganisa:
Usizo kanye nokwelulekwa kwinqubo yokufaka isicelo emndenini osele;
Uma kunesidingo, usizo lwezomthetho lungahlelwa ukuze lusize ekuhunyushweni kwe-WILL kanye nokugcinwa kwamaphepha anesidingo;
Ukwelulekwa kuyonikezwa ezindabeni ezinjengokuthola isitifiketi sokushona kanye namaphepha agunyaza ukudlula emngceleni;
Ukudluliselwa kudokotela ohlola isidumbu kuyokwenziwa uma kunesidingo sokusihlola
Ukudlulisela kubangcwabi abaziwayo kanye nabanosizo ngezinye izinto ezimayelana nomngcwabo, njengokuphakela ukudla kanye nezinto zokuhamba kungenziwa, kanti amakilayenti ayahlomula kwisipiliyoni sethu kanye nokwazi kwethu labo abaziwayo abaletha usizo.
Lungalethwa usizo uma kukhona abafuna ukwazi ngabadayisi bamatshe ethuna.
Lutholakala kanjani lolu sizo
Lolu sizo lutholakala amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Isihlobo selunga singawuthola lo mhlomulo, isihlobo singazitholela sona noma siluthole ngomqashi ngokushayela i-call centre esebenza amahora angama-24 ku 086 0004 080. Izingcingo zingaphendulwa nganoma oluphi ulimi olusemthethweni lwaseNingizimu Afrika.
Ulwazi oludingekayo ukuze kuqhutshekwe nesicelo semali:
Igama nenombolo ye-ID yoshonile
Igama kanye nekhodi yesikhwama noma uhlelo lomqashi
Indawo lapho eshonele khona
Chofoza ukuze ufinyelele ifomu lokwenza isicelo noma ushayele 086 0004 080